क्रेडिट कार्ड बोक्ने रहर छ ? गर्नुहोस् अनलाइन आवेदन - नेपालबहस
क्रेडिट कार्ड बोक्ने रहर छ ? गर्नुहोस् अनलाइन आवेदन
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले ग्राहकको सहज पहुँच र सुविधालाई ध्यानमा राखी क्रेडिट (credit) कार्डको दरखास्त फारम अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै ग्राहकहरुले आफ्नो credit limit बुझ्न र कार्ड कसरी पाउने भन्ने सम्बन्धी जानकारी अत्याधुनिक प्रविधियुुक्त अनलाइन प्रणालीको माध्यमबाट पाउन सक्नेछन् । क्रेडिट कार्ड लिन इच्छुक ग्राहकहरुले ग्लोबल आइएमई बैंकको वेबसाइट www.globalimebank.com मा गई आवेदन दिन सक्नेछन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले समय सापेक्ष रुपमा यस्ता प्रविधिहरु मार्फत ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो प्रकारको योजनाहरु ल्याउने गरिरहेको छ । बैंकले अत्याधुनिक प्रविधियुुक्त भाइवर बैंकिङ्ग सेवा, मोबाइल बैंकिंङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुका साथै अष्ट्रेलिया, बेलायत र भारतमा प्रतिनिधि-सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले मलेसिया, दक्षिण कोरिया, कतार, युएई, बहराइन लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले बैंकले १४० शाखा, १४८ एटिएम, ३० एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउण्टर, १८१ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा र ३ प्रतिनिधि-सम्पर्क कार्यालय मार्फत आफ्ना ११ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरु माझ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
अघिल्लो लेखहावादारी बन्दै छ नेपाल भ्रमण वर्ष
अर्को लेखगर्भनर नेपाललाई सर्वोच्चको झापड ! प्राइम बैंकका सीईओ मानन्धरको पुर्नबहाली
माछापुच्छ्रे बैंकको १९ वटा निःशुल्क सेवा, असोज महिनाभर छुटै–छुटको वहार